Banyere Anyị - Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ tumadi na-amị: naịlọn tie, igwe anaghị agba nchara tie, Steel ntu waya kaadị, waterproof cable gland, ọnụ ngọngọ, circuit emebi, pointer mita, digital mita na ike mita wdg Products na-n'ọtụtụ ebe na ọrụ: ígwè, ike, ngwá electronic, nkwukọrịta, agha, na-ano, nkà mmụta banyere ígwè, Petrochemical, ọkụ, okporo ígwè njem na ndị ọzọ ọrụ. Ngwaahịa na-exported ka North America, South America, na Middle East, Africa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, dị ka ihe karịrị 90 mba na mpaghara.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe nke 17000 square mita, na ihe karịrị 500 ndị ọrụ. Adaba njem, nso Shanghai, Ningbo na ndị ọzọ ọdụ ụgbọ mmiri. The ụlọ ọrụ nwere ike arụpụtaghị na creativity, aghọwo a ọkachamara, nnukwu-ọnụ ọgụgụ na centralized n'ichepụta ụlọ ọrụ dị ka otu n'ime bupu ngwaahịa.
The ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ịme elu mmepụta ngwá na ọkachamara nka na ụzụ na management pesonel, iji hụ na elu àgwà ngwaahịa na ahịa afọ ojuju. The ụlọ ọrụ nwetara ISO9001 quality usoro asambodo na CCC, CMC, SGS, OA, KEMA, RoHS, CB na BV na ndị ọzọ na anụ ụlọ na mba na asambodo.
The ụlọ ọrụ ketara ọrụ ebumnuche nke "àgwà mbụ, dabeere na ugwu, ahịa ọtụtụ", dum heartedly ike mara mma n'ọdịnihu na ochie na ọhụrụ ahịa aka na aka.